Qaramada Midoobey oo dalbatay in la kordhiyo dhaqaalaha ku baxa gargaarka Soomaaliya – SDNTV
Qaramada Midoobey oo dalbatay in la kordhiyo dhaqaalaha ku baxa gargaarka Soomaaliya
Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha gargaarka ee UNOCHA ayaa ku baaqday in sare loo qaado dhaqaalaha lagu bixiyo gargaarka Soomaaliya.
Xafiiska isku dubbaridka arrimaha gargaarka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay hoosu dhaca ku yimid fulinta mashaariicda ay la xiriirto dhaqaale la’aanta taas oo saameyn ku yeelan karta guulihii dhinaca gargaarka ee Soomaaliya.
Xafiiska OCHA ayaa sheegay in dhibaatada hadda taagan ay sabab u tahay saddex dhibaato oo kala ah, COVID19, Daadadka iyo Ayaxa, waxaana ay sare u qaadeen baahida gargaarka ee Soomaaliya.
Sida ka muuqata warbixin ka soo baxday xafiiska OCHA barnaamijka qorsheynta howlaha gargaarka ee Soomaaliya ayaa u baahan $1.01Bilyan oo doollar si loogu kaalmeeyo 3milyan oo qof oo ka mid ah 5.2Milyan oo baahi gargaar ay ku heyso Soomaaliya, warbixinta ayaa lagu xusay in lahelay kaliya $575Milyan oo ka mid ah lacagaha loo baahnaa.
Waxaa kaleoo lagu xusay warbixinta In Hay’ado badan oo fuliyaha howlaha gargaarka ay heleen 35% dhaqaalihii ay dalbadeen ee ay ku howlgeli lahaayeen.
Warbixinta xafiiska UNOCHA ayaa lagu sheegay in ay bahwadaag latahay 363 hay’dood oo gagaarka naf badbaadinta ah ee Soomaaliya si loo badbaadiyo nolosha Saddex Milyan oo qof oo ka mid ah 5.2 Milyan Soomaalia ah oo gargaar u baahan.
Previous Sii hayaha Ra’iisulwasaraha oo la shiray wakiillada Beesha Caalamka
Next Kenya oo baajisay banaanbax lagu diiddanaa xannibaadda Qaadka ee Soomaaliya.